Ahịa, Ahịa & Ọrụ: Iwu Ọhụrụ nke Njikọ Ndị Ahịa | Martech Zone
Ahịa, Ahịa & Ọrụ: Iwu Ọhụrụ nke Njikọ Ndị Ahịa
Monday, December 9, 2013 Monday, December 9, 2013 Kelsey Cox
Dika mgbasa ozi ndi mmadu na-enye ndi ahia oke olu karia ka ha nwere na mbu, ulo oru ndi kachasi nma na agbanwe agbanwe uzo ha si abanye ahia, oru ndi ahia na ahia. Kwa ụbọchị, ndị ahịa America nwere mkparịta ụka metụtara ijeri 2.4. Kedụ ka a ga-esi kwuo ụlọ ọrụ gị? Ndị ahịa nwere obi ụtọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na iji nyere gị aka ịghọta iwu ọhụrụ nke itinye aka na ndị ahịa, sap achịkọtala ozi niile dị mkpa na infographic dị n’okpuru.
Ọ bụ ezie na ngwaahịa ụlọ ọrụ dị mkpa, naanị 40% nke ndị dị njikere ịkwado na ụlọ ọrụ ahụ kpebisiri ike site na nghọta ha banyere ngwaahịa yana 60% kpebisiri ike site n'echiche ha banyere ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ enweghị ike ijikwa mkparịta ụka gbara ụlọ ọrụ ha gburugburu, ha nwere ike ị paya ntị na ya wee kpụzie ya n'ụzọ kachasị mma.
N'ihe banyere ire ahịa, ndị ahịa kwesịrị itinye aka na ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi nwere ike ime nke a site na ịghọta ihe ịma aka dị iche iche nke ndị ahịa ha, na-ejikọ ha na mbụ iji kpụzie ọhụụ ha, yana ịmepụta ọmarịcha ịzụ ahịa na ha enweghị ike ichere ịgwa ndị enyi ha .
Ọrụ ndị ahịa mba ụwa dị oke mkpa maka ịmepụta ndị na-akwado ndị ahịa. 59% nke ndị ahịa ga-adị njikere ịnwale akara ọhụrụ iji nweta ọrụ ndị ahịa ka mma. Ọ bụrụ n ’ị ma maka ndị ahịa gị karịa ka ha maara maka gị, ị ga - ejide n’aka na a na - ekwu oke maka akara gị mgbe niile.
Tags: azụmahịaaka ndi ahiaahụmahụ ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịamarketingNkwado ire ahịaelekọta mmadụ media
SEO na New SEO
Sam onye azu
Dec 12, 2013 na 1:24 PM
Isiokwu na-akpali mmasị! Jiri nlezianya kọwaa nke ọma ihe osise eserese. Kpamkpam kwenyere na ndị ahịa nwere obi ụtọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ